သမ္မတရှီက ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု ၊ ပါရီသဘောတူညီချက်အား အပြည့်အဝ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြောကြား - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ် ဝင်/ထွက်ပေါက်အား အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်က ရိုက်ကူးထားစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က ဘုံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် မတူခြားနားသော တာဝန်ဝတ္တရားများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂသဘောတူညီမှု မူဘောင် နှင့် ပါရီသဘောတူညီချက်အား အပြည့်အဝ နှင့် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားရန်အတွက် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် တိုက်တွန်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။
သမ္မတရှီသည် ၁၆ ကြိမ်မြောက် G20 ခေါင်းဆောင်များ၏ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ပေကျင်းမြို့မှ နေ၍ ဗီဒီယိုလင့်ခ်ဖြင့် တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထိုသို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Xi stresses full, effective implementation of UN climate change convention, Paris Agreement
BEIJING, Oct. 31 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Sunday called for efforts to fully and effectively implement the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement, following the principle of common but differentiated responsibilities.
Xi made the remarks while addressing the 16th G20 Leaders’ Summit via video link in Beijing.
Photo taken on Sept. 20, 2021 shows an entrance and exit of the UN headquarters in New York. (Xinhua/Wang Ying)